Harry Winks Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Mpilalao Football English
Mpilalao Football Welsh
Mpilalao Football any Belzika
Mpilalao Football Kroasia
Mpilalao Football Football Czech
Mpilalao Football Football
Mpilalao baolina kitra frantsay
Mpilalao Football Alemanina
Mpilalao Football any Italiana
Mpilalao Football Swiss
Mpilalao Football Ghanian
Mpilalao Football any Ivory Coast
Mpilalao Football Nizeriana
Mpilalao Football any Senegaly
Mpilalao Football Arzantina
Mpilalao Football any Brezila
Mpilalao Football any Columbian
Mpilalao Football any Orogoay
Mpilalao Football Kanada
Tonga soa!Midira ao amin'ny kaonty
Indray ny tenimiafina
Nahoana ny tantaran'ny fahazazana
Maninona no misy ny zavamisy momba izany
Tonga soa! Midira ao amin'ny kaonty
Hadinonao ny tenimiafinao? Get fanampiana
rehetraMpilalao Football EnglishMpilalao Football Welsh
Tantara Eberechi Eze Childhood plus Untold Biography Facts
Dean Henderson Zazakely Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Eddie Nketiah Tantaran'ny Ankizy Miampy Plus Untold Biography Facts
Tom Davies Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Facts
rehetraMpilalao Football any BelzikaMpilalao Football KroasiaMpilalao Football Football CzechMpilalao Football FootballMpilalao Football FootballMpilalao baolina kitra frantsayMpilalao Football AlemaninaMpilalao Football any ItalianaMpilalao Football FootballMpilalao Football FootballMpilalao Football Swiss
TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN
Michael Obafemi Tantara momba ny fahazazana manampy Untold Biography Facts
Tomas Soucek Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Milan Skriniar Story Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Tantara Roman Burki Childhood momba ny Untold Biography Facts
rehetraMpilalao Football GhanianMpilalao Football any Ivory CoastMpilalao Football NizerianaMpilalao Football any Senegaly
Samuel Chukwueze Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Facts
Tantara momba ny fahazazan-jaza Habib Diallo miampy Untold Biography Facts
Jordan Ayew Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Ismaila Sarr Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
rehetraMpilalao Football ArzantinaMpilalao Football any BrezilaMpilalao Football any ColumbianMpilalao Football any Orogoay
Tantaran'ny zazakely Angel Correa sy Untold Biography Facts
Duvan Zapata Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts
Giovani Lo Celso Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts
Papu Gomez Zaza Zazakely Pold Glyz Plus Untold Biography Facts
rehetraMpilalao Football Kanada
Tantara David David Childhood plus Untold Biography Facts
TOROHEVITRA HO AN'NY TANORA AMERIKA
Giovanni Reyna Tantaran'ny Ankizy Iray Manampy amin'ny Untold Biography Facts
Alphonso Davies Tantaran'ny Ankizy Miampy Loold Biography Facts
Christian Pulisic Tantara Mitantara ny Tantara Momba ny Tantaram-piainana Tsy Hita Maso
TAFIKA ASIA FOOTBALL
Tantaran'i Lee Kang-in Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Faiq Bolkiah Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Tantara Takumi Minamino Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Ny tantaran'ny Caglar Soyuncu momba ny fahazazana sy ny zavamisy momba an'i Untold Biography
Takefusa Kubo Childhood Tantara Plus Untold Biography Facts
OSTANIA FOOTBALL STORIES
Tantaran'i Chris Wood Childhood momba ny zava-misy momba an'i Untold Biography Facts
Ny tantaran'i Mile Jedinak momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ahodin-tsary momba ny tantaram-pitiavan'i Aaron Mooy momba ny tantaram-pahaterahana
Ny tantaran'i Tim Cahill Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Mark Viduka tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Harry Winks Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA
Nohavaozina farany teo Aprily 15, 2020
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Little Iniesta". Ny tantaran'i Harry Winks tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny fahatanorany hatramin'izao. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny endriny tsara tarehy, ny vondrona kely ary ny fomba filalaovana. Na izany aza, vitsivitsy monja no mihevitra ny tantaran'i Harry Winks 'tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Harry Winks Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Fiainana tany am-piandohana & fianakaviana
Nanomboka, ny anarany feno dia i Harry Billy Winks. Harry Winks araka ny fantany dia teraka tamin'ny 2nd ny volana febroary 1996 ho an'ny reniny, Anita Winks sy ny rainy, Gary Winks ao amin'ny Hemel Hempstead, Royaume-Uni.
Teraka tamin'ny fianakaviana feno fitiavana baolina kitra i Harry. Gary rainy dia mpilalao baolina lavitr'ezaka teo aloha izay nitendry an'i Hemel sy Berkhamsted. Ny fianakaviana Winks dia mpanohana an'i Spurs efa ela, nanomboka tamin'ny 1984 taorian'ny nandresen'ny Cup UEFA.
Raha niresaka momba ny tantaram-pianakaviana na niaviany i Harry Winks, dia avy amin'ny fianakavian'ny Espaniola nentim-paharazana tamin'ny reniny sy ny raibe sy renibeny. Na izany aza izy dia mirehareha amin'ny maha-Britanika azy amin'ny alàlan'ny rainy. Nihalehibe i Harry niaraka tamin'ny anabaviny antsoina hoe Milli izay tena miaro azy.
Na any an-trano izany na any am-piasana amin'ny havany, i Harry, sary etsy ambany, dia hijery foana ny anabaviny mamy.
Ankehitriny, mahafinaritra be sy mirehareha amin'ny Milli ny mahita ny lehibeny, ny olona akaiky indrindra ary ny namana mpiara-miasa amin'ny heloka bevava nahazo ny fahombiazan'ny baolina kitra.
Amin'izao fotoana izao tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, tsy misy olona eto amin'izao tontolo izao manana fifamatorana matanjaka izay nizara an'i Harry, Milli sy ny maman-dry Anita.
Harry Winks Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Asa fanorenana
Niresaka momba ny maha-mpankafy ny Spurs, hoy ny rain'i Harry, indray mandeha:
Mazava ho azy fa i Harry dia mpankafy Spurs, izay notereny tamiko!
I Harry toy ny reny sy dadany Tottenham Hotspur fananana na dia efa nanomboka nilalao baolina kitra aza. Nanatrika ny lalao voalohany tsy hay hadinoina tao amin'ny White Hart Lane i Harry fony izy enin-taona. Jereo ny tiana Michael Carrick, Robbie Keane ary I Teddy Sheringham dia nanosika azy hanomboka hikapoka izay hita ho toy ny baolina kitra.
Raha niresaka momba ny zava-niainan'ny zana-baoliny tamin'ny fahazazany ny renim-pianakavian'i Harry Wink dia niteny tamin'ny Gazette hoe:
"Na dia mbola kely aza i Harry dia nilalao teo am-pihodinkodina iray. Izy dia manakorontana izany na aiza na aiza. Avy eo dia nifindra tamin'ny baolina tennis izy. Nandehandeha foana teny an-trano foana izy, ka nampijaly ahy! "
Raha tsy manapaka baolina baolina manodidina na ao an-tokantrano ao an-tokantranony izy, dia ho hita eo akaikin'ny afisy i Harry David Beckham ary Michael Owen.
Na dia teo aza ny fitiavan'i Harry an'i Spurs, dia nanapa-kevitra ny hikolokolo ny akanjony sy ny shorts any Angletera izy. Raha mijery ny sary etsy ambony ianao, dia ho hitanao fa ny akanjo tena tiany indrindra.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, ny Anglisy nasionalin'ny England dia tena tsara tarehy azy.
Harry Winks Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Karohy aloha vao manomboka
Ny tanjon'i Harry dia hita taratra tamin'ny taona 5 fony ny ray aman-dreniny nisoratra anarana tao amin'ny lisitry ny Tobin'ny Soccer & Ross. Nandroso hatrany izy nilalao tamin'ny Echoes FC tao Hemel Hempstead izay nahafantarana ny talentany voajanahary.
I Harry dia fantatra ho olona iray manana hery matanjaka ary na dia eo aza ny rindrina matevina, dia mbola eo an-tokonam-baravarana foana izy. Teo am-piandohana, dia nanana ny fianarany baolina kitra i Harry, niaraka tamin'ny Sekoly Ambony Cavendish izay nahazoany mari-pahaizana tamin'ny taona 11.
Harry Winks Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana tany am-boalohany
Noho ny fahaizany mihazona ny baolina ho toy ny zazakely, i Harry dia natolotry ny mpampianatra azy tao amin'ny tobin'i Soccer & Andy 's Soccer mba hanatrika ny fitsapana amin'ny Tottenham Hotspurs. Nandalo izy ary nisoratra anarana tao amin'ny club. Na dia tao amin'ny Akademia Tottenham aza, dia maro ireo klioba no mbola nanandratra azy hatramin'ny mbola kely.
Ny ray aman-drenin'i Harry Anita sy i Gary dia naniry mafy ny hanamafy ireo sorona maro nataon'i Harry nandritra ny andro voalohany tany Tottenham. Voalohany, fony tanora zandriny i Winks dia nijaly tamin'ny fitomboan'ny ratra sy ny aretina. Na izany aza, ny lehiben'ny Akademia McDermott dia nanam-pinoana an'io ankizilahy kely io tahaka ny nataony tamin'ireo mpanao gazety vao haingana, toy ny Kane ary Andros Townsend. Na dia Teddy Sheringham dia nahaliana ny tanora Winks sy Scott Parker niseho ho mpanolo-tsaina.
Harry Winks Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ny fanapahan-kevitra lehibe & Mitsangana mba ho ankamantatra
mba hanokanana ny fiainany amin'ny nofinofiny, dia nanapa-kevitra i Harry fa hivoaka ny trano fonenany amin'ny taona 16 mba hiaina akaikin'ny toerana fanatobiana Spurs. Ny fanapahan-kevitra dia tsy mora ho an'ny fianakaviana Winks. Araka ny amam-panahin'i Anita;
Tsy maintsy niova i Harry, ara-tsaina. Tena nalaim-panahy izy ary tena sarotra ny nizotra tamin'izany fotoana izany. Ny telo aminay - mijoro, Gary ary Milli nijoro ary nitomany rehefa nanidy ny varavarana fidirana teo anoloanay.
Ny ray aman-drenin'i Harry dia mahita azy indray hariva isan-kerinandro. Raha araka ny filazan'i Harry, niala tao amin'ny trano fonenan'ny fianakaviana niaraka tamin'ny olona tsy nihaona taminy izy dia mety ny zavatra henjana indrindra nataony nandritra ny androm-piainany manontolo. Nandeha tany Southgate i Harry, faritra avaratr'i avaratr'i Londres. Nijanona izy niaraka tamin'ny mpivady tsara iray antsoina hoe Lesley sy Matt izay ny tranony dia teo akaikin'ny kianja fampiofanana ny tanora. Soa ihany fa i Matt izay mpampianatra mitondra fiara dia nampianatra an'i Harry ny fiara.
Harry Winks Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Ny tapa-kevitr'i Harry ho lasa matihanina dia tsy lasa toy ny fantatry ny mpilalao fanta-daza. Tamin'ny 27 Jolay 2014, dia nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany niaraka tamin'i Tottenham izy rehefa nahataitra Mauricio Pochettino izay nanara-maso ny horonan-tsary momba ny fampisehoana nataony.
Pochettino nahita an'i Harry ho mpilalao mitovy amin'ireo rahalahiny espaniola Xavi ary Iniesta. Nijery azy koa izy fa samy hafa tanteraka amin'ny mpilatsaka an-tsekoly; Victor Wanyama, Eric Dier, Mousa Dembélé ary Moussa Sissoko. Ny fampisehoana tanjona voalohany amin'ny ligin'i Harry dia nampiseho ny fomba sy azy Mauricio Pochettino dia namolavola fifamatorana matanjaka hatramin'ny fihaonana voalohany nataony.
Gaga i Harry ka niantso an'i Angletera na dia nanao fanombohana efatra aza tao amin'ny ligy ho an'ny Spurs. Gareth Southgate dia nisintona azy noho ny rakitsorany.
Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Harry Winks Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Relationship Life
Fantatrao ve?… Ao amin'ny sarimihetsika tanora tsirairay, ny ankizivavy dia ho lavo amin'ny ankamaroan'ny mpilalao baolina kitra. Amin'ny fotoana iray amin'ny fiainan'ity tovovavy ity, any am-piandohana, misy hatrany ny faniriana hametraka mpilalao kintana iray. Mampalahelo fa mampiseho antsika ny tsy fisian'ny mampiaraka ny mpilalao baolina kitra ny sarimihetsika. Izany no antony iray mahatonga an'i Harry ho mpitovo nandritra ireo taona voalohany niasany.
Ny tantaram-pianakavian'i Harry voalohany dia tonga tamin'ny taonan'ny 22 (Jolay 2018) rehefa nizaha ny vadin'ny vehivavy britanika, Rosie Williams izay 4 taona zokiny. Nipoitra tampoka ilay mpivady namela hotely kintana 5, hotely ao Shangri-La any London.
Tao amin'ny sary, i Harry dia niseho ho tovolahy lavorary ho an'i Rosie rehefa nihazona ny varavarana nisokatra ho azy. Fotoana izao i Rosie dia nipoitra avy tamin'ny fampisehoana reality British Love Island. Nipoitra tao anaty jiro marevaka marevaka ilay ramatoa Welsh, dia tsy maintsy nametraka endrika fampisehoana ho an'ny lehilahy liana. Ny fotoana ihany no hilaza raha horaisin'i Harry ho toy ny sipany na vady izy.
Harry Winks Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana manokana
Teraka sy mangina i Harry, saingy amin'ny lafiny iray, mety ho hafakely sy hentitra izy. Araka ny voamarikao tamin'ny andro fahatanorany, dia olona iray izay mora miova amin'ny fiovan'ny tontolo iainana na ny angovo vaovao manodidina azy.
Fantatrao ve?… Tsy toy ny mpilalao baolina sasany, Harry Winks dia tsy manakaiky kokoa amin'ny mpankafy. Izany dia noho izy nandoa onitra noho ny fanaovana ny tsara. Avelao aho hilaza aminao izay tena nitranga!
Nalaza tao amin'ny klioba iray tao Watford, mpankafy, i Harry, izay niangavy mafy ny mpilalao baolina midadasika noho ny sary misy an'i Winks tsy nahalala ny antony manosika. Mampalahelo fa nitovy tamin'izany ilay mpankafy antsoina hoe Nikhil Shah namoaka ny sariny tao amin'ny pejin'ny media sosialy nampiseho an'i Winks momba ny fandehanana an-dalamby na dia nitera-doza aza.
Ny mpankafy ihany koa dia nandeha nanandrana nifanerasera Ny masoandro hifanakalozan-kevitra fivarotana ny sary izay mety nandeha. Ity ambany ity ny sarin'i Nikhil Shah, izay tsotra sy mieboebo, no nanoratra taorian'ny nandefasana ilay sary tao amin'ny kaontiny Instagram.
Izany dia manazava ny antony mahatonga an'i Winks tsy ho tafalatsaka be loatra amin'ny mpankafy indrindra amin'ny toerana tsy mety. Na dia teo aza ny ezaka rehetra mba hahazoana laza malaza, i Shah dia nandroba ny mpankafy noho ny fiezahana hamoaka Winks.
A CoD Fan: I Harry dia mihevitra ny tenany ho andriamanitry ny lalao antsoina hoe Duty Call of Duty.
Harry na dia teo aza ny fandaharam-potoanan'ny baolina kitra dia mbola mahita fotoana hanatrehana ireo hetsika Call of Duty.
Tsy toy ny mpandevina i Harry Hector Bellerin izay efa nilalao CoD nandritra ny 30 ora isan-kerinandro.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Harry Winks momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
RELATED ARTICLESBebe kokoa avy amin'ny AUTHOR
Mason Holgate Childhood Tantara Miampy Untold Biography Facts
Japhet Tanganga Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts
Curtis Jones Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Tariq Lamptey Child Child Tantara Miampy Untold Biography Facts
Phil Foden Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Tantara Brandon Williams momba ny fahazazana plus Untold Biography Facts
Tantaran'i John Lundstram Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Tyrone Mings Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
AOKA ISIKA hanafoana ny valin-
Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao
Niditra adiresy imailaka tsy fanao ianao!
Alefaso azafady ny adiresy imailaka ato
Daty navaozina: 19 jolay 2020
Daty navaozina: 18 jolay 2020
Daty navaozina: 8 jolay 2020
Goncalo Guedes Childhoood Tantara Plus Fakantsary Biography
Daty navaozina: 27 jona 2020
Ny mpilalao baolina kitra dia manana tantaram-pitiavana. LifeBogger dia manala ny tantara mahagaga, mahagaga sy mahaliana momba ny kintan'ny baolina kitra hatramin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Isika no loharanom-pahalalaham-pahalalana tsara indrindra eran-tany ho an'ny Tantara momba ny Tanora Plus Untold Biography Ireo mpilalao baolina kitra manerana izao tontolo izao.
Mifandraisa aminay: lifebogger@gmail.com
Ny tantaran'i Harry Kane Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Daty navaozina: 29 jona 2020
Danny Ings tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika tantara an-taonany maro
Daty efa namboarina: 15 aprily 2020
Tantara momba ny fahazazan-jaza Todd Cantwell miampy Untold Biography Facts
Paul Gascoigne Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Kyle Walker-Peters tantaram-pahaterahana ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Eric Dier Childhood Story Plus nozaraina momba ny tantaram-piainana